Best Nylon လေဘရိတ်ပိုက်ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ | Jinxing
1.Hose ပစ္စည်း: PA11
2.Hose အရောင်: အနီ / အရောင်အစင်း
3. အထုပ်: 50m ~ 100m / လိပ်
4. အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: CQC
5. စံ: GB16897-2010
ထုတ်ကုန် NYLON ဘရိတ် Hose Package 50 မီတာ ~ 100 မီတာ / roll
အရောင် အနက်ရောင် / အရောင်အစင်း စံ GB16897-2010
ပစ္စည်း PA11 ထုတ်လုပ်မှု 30000M / နေ့
ငွေပေးချေမှုကာလ T / TL / C မူလ HEBEI, တရုတ်
port တင်နေသည် Xingang ဆိပ်ကမ်း,တီကျင်း/ Qingdao, Shandong / Ningbo, Zhejiang / Shanghai
Hose အရွယ်အစား 4X1, 5X1, 6X1, 8X1, 10X1.25, 12X1.5, 14X1.5, 14X2, 16X2
၆။ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း： တစ်ရက်လျှင် ၃၀၀၀၀ မီတာ
7. ငွေပေးချေမှုအသုံးအနှုန်းများ: T / TL / C
၈။ ပို့ဆောင်ရေးဆိပ်ကမ်း - Xingang ဆိပ်ကမ်း， Tianjin / Qingdao / Ningbo / Shanghai
၉. ရေပိုက်အရွယ်အစား - 4X1, 5X1, 6X1, 8X1, 10X1.25, 12X1.5, 14X1.5, 14X2, 16X2
Hebei Jinxing Technology Co, Ltd သည် Hebei, Jenghou ခရိုင်၏စီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်တွင်တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်အရင်းအနှီး ၄၁ သန်းဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ရိယာ ၅၀,၀၀၀ စတုရန်းမီတာကျယ်ဝန်းပြီးဆောက်လုပ်ရေးareaရိယာသည် ၃၆၀၀၀ စတုရန်းမီတာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်စွမ်းအင်အသစ်မော်တော်ယာဉ်၊ ထရပ်ကား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်စသည့် Hydraulic Rubber Rubber Brake Hoses, Hydraulic Brake Tubes, Hose Assembly, Nylon Hoses စသည်တို့ကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့တွင်အထူးပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် DOT, IATF 16949: 2016, SAE J1401, GB16897, 3C စသည့်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီတိတိကျကျလိုက်နာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်နည်းပညာအရခိုင်မာပြီးအလိုအလျောက်မြင့်မားပါသည်။ ၎င်းတွင်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လည်ပတ်မှုနှင့်ရောင်းချပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုတို့ပါ ၀ င်သည်။ ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်လက်ရာမြောက်သောနည်းစနစ်နှင့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
အရည်အသွေးတစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အရေးပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ကုမ္ပဏီသည်အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းကိရိယာများနှင့်တင်းကျပ်သော QC စနစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မတ်လတွင်ကုမ္ပဏီသည် ISO9001 အရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို 2005 ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်“ 3C” အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်“ CQC” အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်လည်း DOT အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ TS 16949. အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
၁၆ နှစ်ကျော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် Jinxing ထုတ်ကုန်များသည်ပြည်တွင်းစျေးကွက်တွင်အလွန်လူကြိုက်များခဲ့ပြီးမြောက်အမေရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ ဥရောပနှင့်အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဒေသရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀ နိုင်ငံသို့တင်ပို့ရောင်းချခြင်းကြောင့်ထုတ်ကုန်များ၏တည်ငြိမ်သောစီးပွားရေးအရည်အသွေးနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဂုဏ်သတင်းကြောင့် ။
ရှေ့သို့ Hydrauic ဘရိတ် Tube ညီလာခံ Yb / T4164-2007
နောက်တစ်ခု: ဘရိတ်ပိုက်ပေါက်များတပ်ဆင်မှု (SAE J1401 စံနှုန်းဖြင့်)